Dibana nathi - Global ARCH
Global ARCH / Dibana nathi
Global ARCH Umdibaniso wemibutho enceda isifo samathambo kunye nesifo sentliziyo (RHD kunye ne-CHD) yesigulana kunye nemibutho yosapho. Isigulana ngasinye, iintsapho, iingcali kwezempilo, kunye nabaxhasi bayakhuthazwa ukuba bajoyine njengamalungu axhasayo. Njenge Global ARCH ilungu uya kuba namathuba okufunda kwi-CHD kunye neenkokheli ze-RHD kwihlabathi liphela. Uya kuba namathuba okuthatha inxaxheba kwizenzo zengingqi, zesizwe kunye nezehlabathi ukuphucula ikamva lomntu ngamnye ochaphazelekayo sisifo sentliziyo esiqala ebuntwaneni.
Inkokeli echongiweyo yombutho ejolise ikakhulu kwisifo sentliziyo okanye isifo samathambo Umntu ongathanda ukuxhasa Global ARCH
Sayina umbutho wakho njengelungu le Global ARCH
Yiba ngumxhasi we Global ARCH